China Janitor Cart-D011-1 ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị nrụpụta | Jinqiu
A na-eme Cart-Cart Comicent Cartor ka ọ dịrị! Debe ihe onunu gi n’otu ebe ya na igwe nhicha mobile kacha. Cartgbọ ala a dị ọtụtụ nwere shelf atọ nwere ihu dị elu, aka na ndị na-ebu broom na nko iji gbanwee maka ịchekwa na ịkwaga ngwaahịa.
D011-1 bụ ụdị nke onye na-ehichapụ ihe na mkpuchi.
Gụnyere 3 wolite ebe nchekwa nchekwa, ngwaọrụ nhicha dị ọcha, isi ihe eji eme ihe na-enye ohere zuru oke iji chekwaa akụ, nko na n'akụkụ abụọ iji dozie mop, broom na pan pan nwere ike ịchekwa oghere ogbe
Ike mkpokọta mkpofu ahihia na mkpuchi mkpofu iji gbochie isi ísì
Mụta oké-oru eyi ihe na plastic ịgba ígwè etiti iji gbochie cracking, flaking na corrosion-ike nke na-ejide ruo 330 pound nke plastic.
2 eluigwe na ala wiil na n'ihu maka ọrụ dị mfe ma dị mfe ịgafe elu ọ bụla, ebe 2 nnukwu ụgbọ ala nchekwa azụ na-egbochi mmịfe
Ọ dị mfe ihicha ma chekwaa-naanị na-ezukọ ma ọ bụ gbasaa igwe abụọ ahụ na ikpo okwu dị n'etiti, na-echekwa oge na ohere
D-011-1 Janitor ụgbọ ibu
Blue, Agba ntụ
A na-eme ka -gbọ ala A na-ahụ Maka Ime Anwansi Anwansi Anwụrụ! Debe ihe onunu gi n’otu ebe ya na igwe nhicha mobile kacha. Cartgbọ ala a dị ọtụtụ nwere shelf atọ nwere ihu dị elu, aka na ndị na-ebu broom na nko iji gbanwee maka ịchekwa na ịkwaga ngwaahịa. A na-arụ ụgbọ ndị ahụ nke polyethylene na-adịgide adịgide maka ogologo oge. Tsgbọala dị mfe iji kpokọta tinyere ngwaike na ntuziaka maka nhazi ngwa ngwa.
Nke gara aga: Nlekọta Cart-D-011
Osote: 24L / 32L Side pịa otu wringer Trolley –H0101 / H0102
Kọntinent Janitor Cart
Obere Carton Cart
Trolley Janitor Nweta
23L / 42L / 58L Quadrate atherchịkọta Bin -B-013 / B-01 ...
660L n'èzí ahihia ahihia-B109
Rolling ahihia Bin-B001-B004 / B001A-B004A